एउटा ब्राउजर सुविधा जुन बजार लिन्छ! | Martech Zone
एउटा ब्राउजर सुविधा जुन बजार लिन्छ!
अघिल्लो रात आज, म एक महान ब्लग पोष्टमा काम गर्दै थिएँ - लिंकहरूको संग्रह जुन मैले विगत केहि हप्तामा पत्ता लगाएको छु कि म तपाईंहरू सबैलाई देखाउन चाहान्छु। म नम्बर १० लाई बाहिर गोल गर्न चाहान्छु केवल यसलाई "शीर्ष १०" बनाउनको लागि।
मैले मेरा बचत गरिएका बुकमार्कहरूलाई ध्यान दिएँ र प्रत्येकको लागि केहि थोरै विनोदी कथनहरू लेखे जुन तपाईंको ध्यान खिच्न र तपाईंलाई कुकुर बनाउन सक्छ। प्रत्येक लिंक पूरा गरेपछि, म नयाँ ट्याब खोल्छु (म फायरफक्स प्रयोग गर्छु), मेरो बुकमार्कहरूमा जान्छ, र लिंक खोल्दछु। तपाईलाई पहिल्यै थाहा हुन सक्छ कि पछि के भयो। मैले मेरो बुकमार्कमा क्लिक गरेँ र नयाँ ट्याबमा नयाँ साइट खोले जहाँ मेरो पोष्ट 90 ०% सम्पन्न भयो।
NOOOOoooooooooooooo! मैले STOP क्लिक गरें। मैले पछाडि क्लिक गरें। मैले अन्डोमा क्लिक गरें। सकियो।
यो थियो को पोष्ट यो त्यस्तो पोष्ट थियो जुन मलाई एक ब्ल्गिंग स्टार बनाउन गइरहेको थियो। पोष्ट जुन मेरो पुस्तक सौदामा सील हुन गइरहेको थियो। पोष्ट जुन हजारौं ट्र्याकब्याकहरू लिन गइरहेको थियो, यसको शीर्ष बनाउनुहोस् Digg, र मलाई टेक्नोराटी शीर्ष १०० मा राख्नुहोस्। तर यो गयो।
त्यसैले यहाँ छ ... एक ब्राउजर सुविधा जुन सम्पूर्ण बजार खपत गर्दछ। फाराम-मा-फ्लाई-सेभ र अनडु-बेवकूफ क्लिक-क्लिक-कि-म-मात्र-त्यो-कि-मा-गरे-मा-क्लिक-थिएन। मसँग आकर्षक नाम छैन, मैले पहिले नै मेरो शानदार लिंकहरूको सेटमा मेरो सबै विवेक नष्ट गरे। मैले बुझिन किनकि किन कम्प्युटरले यो गर्न सक्दैन, यद्यपि। यदि तपाइँको कुञ्जीपाटी इनपुट उपकरण हो, र अक्षरहरू स्क्रिनमा देखा पर्न सक्छन्, तब किन (OH WH !!!) तपाईले भर्खर एउटा पाठ क्षेत्रमा १. can't सेकेन्डमा पृष्ठ लेख्नु भन्दा पहिले के लेख्नु भएको कम्प्युटरले याद गर्न सक्दैन।
त्यसैले त्यहाँ तपाईं मोजिला, माइक्रोसफ्ट, ओपेरा जानुहुन्छ ... यो सुविधा यो हो कि म तपाईंलाई सँधै माया गर्छु। कृपया, कृपया तपाईंको अर्को रिलीजमा राख्नुहोस्। कृपया
प्रतिलिपि अधिकार र फ्रान्सेली क्रान्ति
यसैले म Blogjet कार्यक्रम प्रयोग गर्छु। मैले ब्राउजरमा "हिचकी" को कारण धेरै पोस्टहरू गुमाए।
Blogjet प्रयोग गर्न को लागी एक थप लाभ यो हो कि तपाईले आफ्नो हार्ड ड्राइभमा स्थानीय रूपमा ड्राफ्ट पोस्टहरू बचत गर्न सक्नुहुन्छ। छविहरू थप्नु पनि एक हावा हो।
त्यहाँ अन्य प्रकारका पोस्टिंग सफ्टवेयरहरू छन्, ecto दिमागमा आउँछ, तर यसलाई हेर्नुहोस्। एउटा महाकाव्य पोस्ट बचत गर्नु प्रवेशको मूल्यको लायक छ।
कृपया ब्लगस्पटलाई घृणा नगर्नुहोस् किनभने यो सुन्दर छ... तपाईंले यसलाई माया गर्नुपर्छ-तपाईंको-कार्य-अन-द-फ्लाई कार्यक्षमता...
वा, तपाईंले आफ्नो पोस्टहरू Google कागजातमा रचना गर्न सक्नुहुन्छ जसमा स्वत: बचत कार्यक्षमता पनि छ।
Eehm... यसलाई भित्र पस्न चाहन्न, तर ओपेरासँग यो सुविधा केही समयको लागि रहेको छ - Opera7IIRC देखि। तपाईंले ट्याब बन्द नगरेसम्म फारम सामग्री क्यास हुनेछ, त्यसैले 'पछाडि' थिच्दा फारम क्षेत्रहरूको सामग्री पुनर्स्थापित हुनेछ। अन्यको सबैभन्दा भर्खरको रिलीज, Firefox 2.0 र MSIE 7.0 ले पनि यो प्रस्ताव गर्दछ, आविष्कारकबाट प्रतिलिपि गर्दै 🙂
चीजहरू गलत हुन सक्छ, विशेष गरी MSIE र Firefox मा, यदि तपाईंको रचना फिल्ड कुनै पनि क्यासिङ निषेध गर्ने पृष्ठमा छ भने। ओपेरा अलि बढी संवादात्मक छ, र प्रायः 'पछाडि' थिचेर पृष्ठलाई रिफ्रेस गर्नबाट बचाउँछ।
त्यो शानदार प्रतिक्रिया हो! धन्यवाद, सबैजना!
टम: मैले चेक आउट गरें ब्लगजेट, दुर्भाग्यवश त्यहाँ कुनै म्याक संस्करण छैन। 🙁 यो एक महान सानो एप जस्तो देखिन्छ, यद्यपि!
विलियम: म वास्तवमा ब्लगस्पटमा मेरो ब्लग धेरै समयको लागि थियो। मलाई यो मन पर्यो तर एकपटक मैले केही ध्यान आकर्षित गर्न थालेपछि, म साँच्चै मेरो आफ्नै डोमेन चाहन्थे। म ब्लगरलाई मेरो र मेरो सामग्रीको 'स्वामित्व' बनाउन चाहन्न। मलाई थाहा थिएन कि तिनीहरूसँग त्यो सुविधा थियो, यद्यपि। म केहि हेर्न जाँदैछु र हेर्नुहोस् कि म WordPress को लागी समान सुविधा पाउन सक्छु।
RIJK: कसलाई थाहा थियो? मसँग साझेदारी गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। म डाउनलोड गर्न जाँदैछु ओपेरा9र हेर्नुहोस् मलाई यो कस्तो मन पर्छ!
डिसे 2, 2006 मा 1: 04 AM
मलाई तपाईको समस्याको सम्भावित समाधानको कल्पना थियो। तपाइँ तपाइँको सबै कुञ्जी स्ट्रोकहरू क्याप्चर गर्न कुञ्जी लगर स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसोभए, तपाईंले आंशिक रूपमा पूरा भएको फारमबाट नेभिगेट गर्दा, तपाईंले आफ्नो कुञ्जी लग फाइल खोल्न सक्नुहुन्छ र तपाईंले टाइप गर्नुभएको सबै कुरा सजिलै फेला पार्न सक्नुहुन्छ।
म म्याकको लागि पर्याप्त भाग्यशाली छैन, तर म पक्का छु कि तपाईंले यसको लागि नि: शुल्क कुञ्जी लगर फेला पार्न सक्नुहुन्छ। मैले द्रुत गुगल खोजबाट फेला पारेको एउटा यहाँ छ:
(होइन, म त्यो कम्पनीको लागि काम गर्दिन!)